Ny telefaona Huawei sy Honor voalohany dia efa manana ny Android Pie beta | Androidsis
Eder Ferreno | | Huawei, Android Version
Andro vitsy lasa izay, ny programa beta dia naseho tamin'ny alalàn'ny fizarana vaovao an'ny Android hanatratra ny telefaona Huawei sy Honor. Beta fisaorana izay, ho fanampin'ny Android Pie, dia afaka mahazo EMUI 9 ianao. Ity no kinova vaovao an'ny sosona fanaingoana, miorina amin'ny kinova farany an'ny rafitra fiasa. Ary toa efa manana beta ireo mpampiasa voalohany.
Efa natomboka ny dingana fitsapana, ahafahan'ny mpampiasa manana ny maodely Huawei sy / na Honor hisoratra anarana ao anatiny. Azon'izy ireo atao koa ny mitsapa ny EMUI 9 amin'ny Android Pie.
Ity dingana voalohany amin'ny andrana ity dia voafetra amin'ny modely manokana vitsivitsy, izay sasantsasany amin'ireo anisan'ny taranaka roa farany an'ny Huawei, ankoatry ny maodely avo lenta an'ny Honor. Ka vitsy ny maodely afaka miditra amin'izany. Ireto ny telefaona:
Huawei P20 sy P20 Pro
Modely telo isaky ny marika hiditra amin'ity beta Pie Android ity miaraka amin'ny EMUI 9. Voafetra ny isan'ny mpampiasa afaka misoratra anarana satria dingana voalohany amin'ny fizotrany izany, ka izay liana dia mila mailaka misoratra anarana. Ny fetran'ny toerana amin'ity tranga ity dia 100 fotsiny, izay mila fotoana kely vao vita.
Amin'izao fotoana izao Vaovao momba ny Android Pie sy EMUI 9 izay ho tonga amin'ny telefaona dia tsy voalaza amin'ireo marika sinoa roa miaraka amin'ity beta ity. Na dia antenaina aza fa ho tonga ao amin'ireo telefaona ireo avy amin'ny mpanamboatra sinoa ny vaovao rehetra momba ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa. Hihaino tsara ny fivoaran'ny beta isika amin'ny herinandro ho avy.
Tsy voalaza momba ny fotoana hanitarana ity beta itySaingy tsy tokony haharitra ela izany, mahita ny faharetan'ny fiasan'ny orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Android Pie beta miorina amin'ny EMUI 9 dia tonga any Huawei sy Honor